Kuphela isibini okanye isithathu decades eyadlulayo, seriousness kubudlelwane kunye nonresident iqabane lakho waba measured yi-iminyaka engama-ngokwembalelwano weighing ngenyameko zilondolozwe iimvulophu. Namhlanje, eli road ukuya marital ulonwabo ikhangeleka kuba throwback. Imibulelo Dating zephondo, budlelwane nabanye unako ukuqhubeka kwi-isimo”ilungisa kuba wedding”emva kwiiveki ezimbalwa. I-obstacle ayisayi nkqu yokuhlala yakho oyikhethileyo. Eyona nto wena u deserve ngamnye enye.
Indlela khetha Dating inkonzo ye
Acquainted nge-Internet fun kwaye kulula. Nangona kunjalo, khumbula ukuba onesiphumo unxibelelwano ngu enxulumene ne-imingcipheko ethile. Umzekelo, intle macho (zinokuphathwa babe) ayikwazanga kuba pimply teenager (fernández fat kubekho inkqubela kunye glasses). Okanye omnye umntu emva elide ngokwembalelwano ngesiquphe, kuza ixesha elide-awaited intlanganiso kwi-yokwenene ebomini. Kwaye kuyo iintyatyambo. Kuba trustworthy intentions unako fihla a urhwaphilizo okanye swindler. Ngaba oku kuthetha ukuba i-intanethi Dating kufuneka anike phezulu.
Thina nje kufuneka balungiselele.
Ukuba eyona ukukhusela ngokwakho kwi intruders, kwanele ukuba balandele ezimbalwa imigaqo:
zange disclose na-mali okanye inkcazelo yobuqu (incwadana yokundwendwela iingcombolo okanye ikhadi lebhanki letyala);
lumka ezahlukeneyo amakhonkco banako kuba ngolunya, nkqu ukuba babe ithunyelwa yakho umchasi (ngaphandle ukusuka france iphepha akukho namnye ngu-immune);
yabela yokuqala umhla nge-intanethi abahlobo kwi-wonke ndawo, kuxelela abahlobo apho kufuneka futhi ke, gcina ifowuni handy;
uzive ukhululekile ukuba ingxelo yabo suspicions ukuba inkxaso okanye ulawulo lwe-site (inkangeleko spam okanye abusive imiyalezo).
Ngoko ke, armed kunye nokhuseleko iincam, qala ukukhetha inkonzo kuba icacile. I-isikhokelo.
Kubonisa ntoni okujoliswe kuko ababukeli bomdlalo bangene zenkonzo. Nokuba meets iimfuno zakho. Ukuba osikhangelayo umntu kwi-udidi, akuyomfuneko ukuba ufake isicelo kwi-site nge predominant ababukeli bomdlalo bangene kutsho kwi- ezayo.
Makhe sibone mangaphi amalungu kwi-site kwaye esebenzayo. Nangona kunjalo, amanani nabasebenzisi ayikho isoloko kulungile. I-iphepha lemibuzo malunga babe get ezilahlekileyo amidst a million abanye.
Funda reviews. Ungafumana kwabo kwiwebhusayithi. Ukufumana phandle malunga:
yintoni Jikelele atmosphere kwi-site; nokuba ngaba kufuna investing imali;
zingaphi spam kwaye iibhonasi ii-akhawunti;
kukho stories ingaba real ezinzima budlelwane emva kwintlanganiso ngomhla we-icebo, njalo-njalo.
Ukuba ubhalise kwi Dating zephondo yenza entsha ibhokisi yeposi. Oku inyathelo lesi-uza ukukhusela wena kwimeko apho i-akhawunti yakho compromised. Inkangeleko akusebenzi chaza ulwazi ukusuka iindidi”yonke imihla ukususela. ukuba. ndiza kwi-school umdaniso martial lobugcisa ekuphekeni”.
Uninzi ethandwa kakhulu Dating zephondo: kwaye bahlala happily ngonaphakade emva
Zethu umyinge ngu ezahlukileyo ukususela oko ungafumana kwi-Intanethi. Thina zihlolwe iinkonzo kwi-abathengi-intanethi Dating (apha, endleleni, elililo inkokeli). Asikwazanga thatha ubhekiso ukukhangela rhoqo kwi-uphendlo amandla okanye sounding amagama. Akazange thabathela ingqalelo inani abasebenzisi (kubalulekile engaziwayo mangaphi amalungu ezigidi”buried”kwaye kangakanani”hunt”kuba ukuthanda). Zethu umyinge ngu largely zombhali kuphela. Kodwa lusekelwe reviews ka-real abantu (umhlobo, ummelwane, colleague, umhlobo.) kwaye ibali lokwenene kunye ndonwabe iphela. Ukususela tales apho”bahlala happily ngonaphakade emva”.
“bonke fun”: wonke stewardess umyeni-pilot.
Ngomhla we-icebo kugxila ingxowa-a mlingane kwi-khondo lobungcali-mfundo lilonke kwaye uluntu inzala.
A ethembisa indlela
Ngokuqinisekileyo, ngamnye kuba ezimbalwa stories malunga ne-ofisi romances.
Kwaye kunye esivakalayo
Ngokunxulumene nzulu”bounty Hunter”, labasebenzi ubuncinane kanye kokuba umsebenzi budlelwane. Ngaphezu koko, yonke anesihlanu ibali waphela nge-mtshato. Ngoko ke storyline ye-Comedy Eldar Ryazanov ngu”- Ofisi romance”ubani ezinzima izitatistiki isiseko. Njengoko, nangona kunjalo, iwebhusayithi”zonke Dating”.
Analytical inkonzo ye”bounty Hunter”simisele ukuba uninzi emisebenzini romances vumela ngokwakho abasebenzi:
Inshorensi (bonke abaphenduli kule ndawo)
I-uthabatho lwe witting. ye ekrwada mathiriyali.
Le nkonzo ifumaneka kulula ukuyisebenzisa. Bonke ezisisiseko imisebenzi efumanekayo for free. Uyakwazi ukunxulumana a premium i-akhawunti ye – $ ngenyanga, apho unika abanye okuninzi:
elevations kwi-ifomu kwi phezulu;
nako ukubona xa omnye umsebenzisi waba kwi-intanethi lokugqibela;
Pros: convenient yolwazi khangela, ngokuzenzekelayo thelekisa izigqibo ngokusekelwe nzulu uhlalutyo lomgaqo-questionnaires, imisebenzi ye-free, eli qela constantly interacts kunye visitors.
Cons: kwakukho ngokutsha yenzelwe nje kuba Russian ababukeli bomdlalo bangene.
“Dating”: awukwazi kuthenga uthando, kwaye familiarity nceda
Kwapapashwa njengoko site kuba ezinzima Dating ezingama-France kuba abantu ubudala udidi. Sele kukho malunga ne- ubudala kwaye boasts yezigidi amalungu. Abantu bakho ngaphezu abafazi (versus). Xa kufuneka ubhalise kufuneka uzalise i-iphepha lemibuzo malunga, apho ababhekisi phambili kufuneka babe negalelo ngempumelelo befuna ileta yesibini. Premium-akhawunti ayikho cheap $ ngenyanga. Yena ayikwazi ndivuma intetho okanye ukubonisa i-akhawunti ka-abanye abasebenzisi. Ngokuqinisekileyo, kule imeko, ligqiba predominance ka thabatha ingxelo malunga icebo.
Pros: enkulu inani questionnaires, oluneenkcukacha psychological uvavanyo ngexesha ubhaliso.
Cons: akukho kuthenga premium-akhawunti site ngu-useless, uyakwazi kuhlangana kuphela kunye abantu ukusuka kwi-France.
Dating-intanethi: i-intanethi Dating isikhokelo
Yamazwe ngamazwe site, apho waba sele ngaphezu yezigidi questionnaires kwihlabathi liphela. A ezilungele umgqatswa ikhethwe kakhulu kwi-nkqubo we umsebenzi xa kufuneka ubhalise kufuneka uzalise i-oluneenkcukacha personality uvavanyo nto ikhangeleka nje nasiphelo. Nangona iphepha lasekhaya ufumana i-uphawu uzalise umsebenzisi ukhuseleko, spam kwi-akhawunti apho. Ukongeza isiseko (oko kukuthi phantse akukho namnye), kukho kanjalo ahlawule umsebenzi, uxhulumaniso nto leyo iza iindleko – dollazi ngenyanga. Reviews mixed, France kwiwebhusayithi ayikho kakhulu ethandwa kakhulu.
Pros: ifayili bekhamera coverage, inani elikhulu ka-questionnaires.
Cons: ngokukhawuleza bhalisa ayizukusebenza kuza kufuneka uzalise i-enkulu iphepha lemibuzo malunga, apho uza kuthatha ubuncinane imizuzu engama; unxibelelwano, ijonge zabucala kunye neminye imisebenzi ngaphandle kwentlawulo ayifumaneki.
“Iplanethi Wothando”: uthando kwaye izibhengezo
Enye uninzi ethandwa kakhulu Dating zephondo kwi-France, covering kanjalo ababukeli bomdlalo bangene ye-kufutshane ngaphesheya. Kwi- iminyaka engama-bukho, kwakukho i-uqikelelo yezigidi questionnaires. Ubhaliso nkqubo ibonakala, kodwa ukuba ufuna musa yokuthenga i-ihlawulwe kwi-akhawunti (malunga – dollazi ngenyanga nganye), ikhusi iya kuvela ebalukileyo annoying izibhengezo, kwaye inani entsha nabo ngosuku iya kulinganiselwa. Qinisekisa ukuba i-iphepha lemibuzo malunga ngexesha lokuqala iqonga ka-ubhaliso eceliweyo mobile inani.
Pros: ilanlekile ka-abasebenzisi, libanzi bekhamera coverage, free unxibelelwano kunye abanye abasebenzisi.
Cons: ngu-hayi kakhulu believable i-reviews kwi-site (umntu sele atshate umntu wam amaphupha kwi- weeks), thabatha izimvo ingaba isusiwe.
“Ezinzima fun”: yena ubomi ngomhla wesihlanu floor.
Ngamazwe kwi-intanethi Dating site, kunye kwiikhosi kwama- million. Ukhetho umgqatswa ngu iselwa buthathaka, njengoko kukho akukho questionnaires: enyanisweni,”Ezinzima Dating”a loluntu womnatha, apho lixela obona ulwazi malunga umsebenzisi. Ingxelo kwiwebhusayithi ngu ambiguous, kubalulekile umdla apha uza kuba kulungile versed kwi-langaphandle iilwimi.
Pros: nako ukubona ukuba ngubani elilandelayo; kwihlabathi liphela coverage free unxibelelwano.
Cons: matchmaking kwenzeka ntoni nge kunokwenzeka ingozi; kukho reviews ukuba visitors ezisebenza nge izibane zendlela, hayi real abantu.
I-ingcaphephe”Ezinzima Dating”zichaza i-lokukhula popularity ka-iinkonzo zonxibelelwano kuba Dating mercantilism”a cheaper khetho ukuba afumane.”Kwi-rock okanye cinema, uqinisekile ukuba sele nawuphi na umntu. Lo gama kwi-intanethi, yesithili imisebenzi usekela kamongameli kwelinye icala wena yiya amaxwebhu, hoping kuba ngempumelelo acquaintance.
FREE: young kwaye free
Licebo wenziwa kutshanje, ngo. Nangona kwakunjalo malunga. million zabucala kunye ukusebenza ngu amahlwempu: ezinye iindawo site basemazweni uphuhliso kwaye yiya kubo. Reviews kakhulu abancinane, ngoko ke nzima ukwenza ithe ngqo inciphe.
Pros: kwi khangela ingaba prompted ngenisa mobile inani kuba ngeenjongo zokhuseleko; kuba ngaphandle kwentlawulo ka-encinci izibonelelo ezinjalo games, zonke kuphumla ifumaneka simahla.
Cons: amahlwempu ukusebenza, bambalwa abasebenzisi.
“Site unxibelelwano kwaye Dating (Dating a ezinzima budlelwane”): nto personal
“Iwebhusayithi chatting kwaye Dating”ngomnye wemisebenzi yokuqala Dating zephondo ka-Internet, abe sele ngaphezu kwe- ubudala. Namhlanje ke sijongana amazwe kwaye ngaphezulu kwama- ezigidi onke. I-reviews-intanethi ingaba ikakhulu thabatha: kukho ezininzi spam kwaye scams, ikhangela fun kakhulu kuba fleeting encounters kunokuba ezinzima budlelwane, rhoqo umsebenzisi lokuqala ingxelo ukuthumela iifoto ka-intimate umxholo. Yamazwe ngamazwe abathengi waba bakhululwe phantsi lemveliso”Dating ezinzima budlelwane”, kodwa ke, ngelishwa, nokusilela”Zonke acquaintance”kunye igama tshintsha alifumanisanga ilahlekile.
Pros: ifayili bekhamera coverage kwaye inkulu inani questionnaires.
Cons: kakhulu implausible opinions (malunga yachts, Iparadesi Kweziqithi, njl. njl.), amahlwempu ukusebenza ngaphandle VIP-akhawunti ezininzi iziphakamiso ka-intimacy, ebusweni izibane zendlela, amahlwempu umthengi inkonzo namahlwempu ulawulo, susa thabatha reviews.
Wam uthando: kuba ifeni ka-anonymity
Esi-Russian site sele existed kuba ubudala, isiseko profiles nje phezu million. Eyona ababukeli bomdlalo bangene abantu ukusuka kwi. I-VIP-akhawunti oninika, basically, umsebenzi stealth. Yokuposa wam photo kwi phezulu $. Ingxelo kwi icebo mixed.
Pros: free unxibelelwano kwaye ubhaliso; kukho zoluntu apho kuwe layisha phezulu imifanekiso kwaye izithuba: ngoko ke awukwazi kuphela incoko yangasese imiyalezo; uyakwazi block umsebenzisi.
Cons: ubhaliso ngaphandle okuchaza ukuziphatha ifowuni inani kwaye kubalulekile ebusweni iibhonasi ii-akhawunti; ubhaliso ayikho oluneenkcukacha; a ezininzi ezingafanelekanga abasebenzisi.
“Amava kufutshane”: trending, kodwa hayi ezinzima
Enye uninzi ethandwa kakhulu mobile apps kuba Dating.
Ngokunxulumene nzulu, mobile Dating izicelo ezifakwe kwindlela i-gadgets yezigidi abantu ehlabathini. Ezi, ezigidi basemazweni”Dating jikelele.”
Apha ungakhetha njengoko ukukhangela ezinzima ubudlelwane phakathi neentlanganiso ngaphandle obligation. Ababukeli bomdlalo bangene, ikakhulu younger kwama- ubudala. Ngaphezu nesiqingatha abasebenzisi younger kwama- ezayo. Eyona msebenzi zenkonzo ukufumana abantu ukuphonononga ezikufutshane. I-reviews ingaba ikakhulu, kodwa kukho izikhalazo malunga ebusweni bots.
Pros: ukunceda, eyobuhlobo ujongano, ilula iphepha lemibuzo malunga, iqhosha imisebenzi, libanzi umqolo we abasebenzisi jikelele ehlabathini, nako ukukhetha i-geo-tag.
Cons: i-app rhoqo freezes kwaye ungqubano ezimbalwa abantu ikhangela a ezinzima budlelwane.
Ukufumana enika umdla umntu, nkqu ngasekunene Dating ndawo ayikho lula. Sicebisa ukuba nakekela kwi-young”niche”zephondo. Kwi-quest ukuba afumane i-ababukeli bomdlalo bangene, baya kuhlawula ngakumbi ingqalelo ukuba inkonzo nokhuseleko. A narrow ugqaliso, umzekelo, elinolwazi, eliminates ifeni yalonto”hotter”. Ezilungileyo comment kwi yakho uphendlo mate
← I-intanethi incoko ne-girls
Webcam Incoko: Free online Ividiyo chatting →